Meizu 16X: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Meizu 16X: Ofisialy vaovao izao dia efa ofisialy
Eder Ferreno | | Meizu, Finday
Niandry ny fahatongavan'ny Meizu 16X nandritra ny herinandro maromaro izahay, na dia nahemotra tamin'ny ora farany aza ny fampisehoana azy. Fa farany, Androany 19 septambra no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa. Miatrika maodely iray mahatratra ny salantsalany premium an'ny mpanamboatra izahay. Telefaona misongadina amin'ny fisian'ny mpamaky rantsantanana eo amin'ny efijery.
Ity Meizu 16X ity dia tsy mahakivy rehefa miresaka momba ny masontsivana. Modely manara-penitra, miaraka amina endriny ankehitriny ary afaka manampy ny orinasa hiditra amin'ny tsena any Eropa. Inona no azontsika antenaina amin'ity finday ity?
Tao anatin'izay herinandro lasa izay dia nanana famoahana maro momba ny telefaona izahay. Misaotra an'io fa efa nanana hevitra saro-pantarina momba izay azontsika antenaina amin'ity maodely ity izahay, izay manamafy ny eo anelanelan'ny volan'ny orinasa. Sehatra mitombo eo amin'ny tsena.
1 Famaritana Meizu 16X
Famaritana Meizu 16X
Ity telefaona ity io dia marika iray ambonin'ireo salanisan'ny mpanamboatra sinoa. Manaraka paikady mitovy amin'izay hitantsika amin'ireo marika sinoa hafa izy ireo, izay mandroso maodely somary tsara kokoa noho ireo efa misy, toa ity tranga ity. Ireto ny pitsipitsony feno momba ny Meizu 16X:
efijery: AMOLED 6 santimetatra misy vahaolana 2160 × 1080 teboka ary tahan'ny 18: 9
processeur: Qualcomm Snapdragon 710 Octa Core miaraka amina core valo miorina amin'ny 2.2 GHz
Karatra sary: Adreno 616
Tahiry anatiny: 64 / 128 GB
Fakan-tsary aoriana: 12 + 20 MP miaraka amina aperture f / 1.8 sy f / 2.6 6-tone LED flash x3 zoom sy OIS
Fakan-tsary anoloana: MP 20 miaraka amina f / 2.0 aperture
bateria: 3.100 mAh miaraka amina fiampangana haingana
rafitra: Android 8.0 Oreo miaraka amin'ny Flyme OS ho toy ny sosona fanaingoana
fifandraisana: 4G / LTE, Bluetooth 5.0, USB-C,
ny hafa: Mpamaky ny rantsan-tanana sy fanekena ny tarehy
lanja: Gramin'ny 154
Ny Meizu 16X dia iray amin'ireo modely feno indrindra natolotry ny marika. Izy io dia telefaona misy vatana vy, izay tsy manana efijery ambony. Ny marika sinoa dia nisafidy efijery misy zana-kazo manify manana tahan'ny 18: 9. Io dia eo amin'ity efijery ity izay nanoloran'ny marika ny mari-pamantaran-tànana. Mahita maodely marobe hatrany isika eny an-tsena miaraka amin'ity endri-javatra ity.
Sonia dia nisafidy ny Snapdragon 710 ho toy ny processeur, ny processeur natao ho an'ny maodelin'ity sokajy antonony ity. Mpikirakira matanjaka kokoa noho ireo ao amin'ny elanelam-potoana 600, izay hanome hery an'ity finday ity sy traikefa mpampiasa milamina. Ka ho afaka hanararaotra an'ity telefaona ity ny mpampiasa.
Araka ny antenaina amin'ity sehatra ity, avo roa heny ny fakan-tsary any aoriana. Ny aperture dia miavaka noho ny famirapiratany, izay tokony hanome sary tsara antsika noho ireo fakantsary ireo. Na dia amin'izao fotoana izao aza isika dia tsy mbola nanana sary nalaina niaraka tamin'izy ireo.
Ny fandefasana ity Meizu 16X any Shina ity dia hatao amin'ny 26 amin'ity volana ity. Ka ao anatin'ny herinandro dia afaka mividy any amin'ny firenena ianao. Amin'izao fotoana izao, loko roa amin'ity finday ity ihany no voamarina, amin'ny loko mainty ary ny volamena / ny raozy iray. Tsy fantatra raha hisy loko bebe kokoa amin'ny fotoana iray, noho izany manantena izahay fa hanana angona bebe kokoa amin'ity lafiny ity.
Araka ny efa nampoizina, ambany ny vidin'ny telefaona. Misy kinova roa amin'ity fitaovana ity, miankina amin'ny fampifangaroana ny RAM sy ny fitehirizana. Ireto ny vidin'ny kinova:
Version miaraka amin'ny 6/64 GB: 2098 yuan (manodidina ny 260 euro hanovana)
Version miaraka amin'ny 6/128 GB: 2398 yuan (eo amin'ny 300 euro eo ho eo no miova)
Amin'izao fotoana izao dia tsy mbola nisy voalaza momba ny fanombohana ity Meizu 16X any Eropa ity. Amin'ny haino aman-jery sasany dia voalaza fa misy tsena eto amin'ny kaontinanta, toa an'i Polonina, izay toa hanombohana azy io. Saingy ny marika dia mbola tsy manana fisian'olona betsaka any Eropa, izay mety hanasarotra ny fandefasana azy. Na dia tsy mbola nisy voalaza momba an'io.
Amin'izay mba manantena izahay fa hahalala bebe kokoa momba ny fandefasana azy tsy ho ela. Satria maodely mety mandeha tsara any Eropa izy, indrindra raha mitazona vidiny ambany izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Meizu » Meizu 16X: Ofisialy vaovao izao dia efa ofisialy
Xiaomi dia miasa amin'ny fahitalavitra telo miaraka amin'ny Android TV
Mbola tsy naheno momba an'i Eelo ve ianao?